कान्सको हिस्सा कसरी बन्न सकिन्छ ? यस्ता छन् उपायहरु ! « News24 : Premium News Channel
कान्सको हिस्सा कसरी बन्न सकिन्छ ? यस्ता छन् उपायहरु !
एजेन्सी । फ्रान्सको कान शहरमा प्रत्येक वर्ष आयोजना हुँदै आएको ‘कान्स फिल्म फेष्टिवल’ हरेक वर्ष चर्चामा आउँछ । प्रत्येक वर्ष ३० हजार भन्दा बढी फिल्म प्रोफेशनल्सहरु यस फेष्टिवलमा आफ्नो प्रतिभा प्रदर्शन गर्दछन् । बालिउडबाका फिल्म मेकर्स र कलाकारहरुले पनि ‘कान्स फिल्म फेष्टिवल’ आफ्नो प्रतिभा प्रदर्शन गर्दै आएका छन् ।
कलाकार नवाजुद्धिन सिद्दीकी र नन्दिता दास यो वर्ष आफ्नो फिल्म ‘मंटो की वजह’को तर्फबाट कान्समा सोमल भए । साउथका कलाकार धनुष पनि सामेल भएका थिए । धनुष पनि आफ्नो फिल्म ‘द एक्स्ट्राअर्डिनरी जर्नी अफ द फकिर’ बाट यस इभेन्टको हिस्सा बनेका हुन् ।
के तपाईलाई थाहा छ प्रत्येक वर्ष फ्रान्समा आयोजना हुँदै आएको ‘कान्स फिल्म फेष्टिवल’ कसरी इन्ट्रि पाईन्छ ?
‘रातो गलबन्दी’मा केकी र संगीतकार कोशिष क्षेत्रीको जोडी
फिल्मको अफर आएको थियो तर खेलिनः लक्ष्मी गिरी , कलाकार
विदेशी नागरिकसंग विवाह गर्ने नेपाली नायिकाहरु